Madaxweyne Farmaajo oo ka badbaaday isku day dil qorshaysan – Idil News
Madaxweyne Farmaajo oo ka badbaaday isku day dil qorshaysan
Posted By: Idil News Staff July 23, 2018
Xog laga helayo ilo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegaya in uu shirqool loogu tala galay in lagu dilo Madaxweynaha Dowladda Fedeaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo 14kii July 2018.
Xogtu waxay intaas ku daraysaa in shirqoolkaas la qorsheeyey in uu dhaco xiliga uu Madaxweyne Farmaajo u safri lahaa ka qaybgalka shirkii looga hadlayey arrimaha Soomaaliya ee lagu qabtay magaaladda Brussels ee dalka Beljimka.
Nooca shirqaaolkaas ayaa la sheegay inuu ahaa mid la xiriiray qaraxyo mataano ah oo la doonayey in lagu burburiyo gaariga uu Madaxweynuhu la socdo.
Sirdoon dowlad ajnebi ah ayaa xogtu sheegaysaa inay Madaxweynaha uga digtay shirqool la doonayo in lagu khaarijiyo, kaasoo lagu soo beegayo xiliga safarkiisa.
Haseyeeshee, 14kii July ayaa qaraxyo mataano ahi waxay ka dhaceen meel u dhow Madaxtooyada Villa Soomaaliya xili uu Madaxweynuhu ka maqan yahay Madaxtooyada, balse lagu soo beegay waktiga uu Madaxtooyada ka soo bixi lahaa, waxaana la xaqiijiyey in mudo 30 daqiiqo ah oo keliya ay u dhexeysay markii uu Madaxweynuhu Villa Somalia kaga baxay wado kale oo aheyn tii laga sugeyey ee qaraxyadu ay ka dhaceen.
Kooxaha weerarka fuliyey ayaa lagu soo waramayaa inay ku labisnaayeen direyska cusub ee Guutada 43aad loo qaybiyey xili dhoweyd oo ay tababar u soo dhamaaday.
Ugu yaraan qaraxyadaas waxaa ku dhintay Lix qof oo ay ka mid ahaayeen kuwii weerarkaas fuliyey, waxaana sheegtay masuuliyadda qaraxyadaas ururka Al-shabaab.
Xil ka qaadista Ku Xigeenadda hay’ada NISA
Saraakiil sar sare oo ka tirsan hay’ada sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa warku sheegayaa inay wax ka ogaayeen shirqoolka la doonayey in lagu khaarijiyo Madaxweynaha.
16kii July Qoraal ka soo baxay agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba Ku xigeen ee hay’adda NISA.
Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah Taliye xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdulqaadir Maxamed Nur Jaamac oo ah taliye ku xigeenka Labaad ayaa Labadaba waxaa xilkaas horay ugu magacaabay Madaxweyne Farmaajo bishii May ee sanadkii la soo dhaafay.
C/qaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa xogtu sheegeysaa inuu horay uga tirsanaan jiray ururka Al-shabaab, balse mar danbe oo uu sheegay inuu ka soo tegay uu xilkan ka helay Dowladda Federaalka soomaaliya.